Home News Hay’adda Culumada Soomaaliyeed oo ka Hadashay Dilkii Marxuum Axmed Dowlo
Weli waxaa taagan hadalheynta dilkii Marxuum Axmed Dowlo oo 20kii Bishaan lagu dilay xaafada Toowfiiq ee degamda yaaqshiid lana gubay.
Marxuumka ayaa waxaa loo dilay Sabab la xiriirta heybsooc dhinaca Guurka ah kadib markii Wiil uu Adeer u yahay uu guursaday Gabar ka dhalatay Qabaa’ilada loogu yeero Waaweynka.
Guddoomiyaha Majmaca Culumada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa marka hore u tacsiyadeeyey qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday Marxuum Axmed dwolo.
Waxa uu sheeegay isaga oo ku hadlayay Magaca Hay’adda Culimada Soomaaliyeed inay aad uga xun yihiin falkii lagu dilay Marxuum Axmed Dowlo,isla markan aya aheyd mid siweyn u taabato.
Dhinaca kale waxa uu sheegay in Guurku uusan aheyn mi ddhibaato keena oo dadka kala fogeeya balse uu yahay mid Bulshada isku-soo dhaweeya oo xiriir fiican keena.
Previous articleHotel Jazeera oo bishii Agoosto ku dalacay W. Maaliyadda iyo xafiiska RW Kheyre lacag gaareysa $450,000
Next articleSafarka Qalbi Dhagax Ee Hargeeysa,Maxuu ka dhigan yahay!!
Xuduuda Soomaaliya Iyo Kenya oo Gabi Ahanba Manta Xiran